I-Bakubung Bush Lodge - ePilanesberg National Park
I-Bakubung Bush Lodge
Ese Pilanesberg National Park, eMzantsi Afrika
I-Bakubung Bush Lodge inikeza indwendwe indawo elungele usapho yokuhlala ese Sun City ikumzi wezilwanya ePilanesberg National Park ekufuphi kulonwabo elifumaneka kwi Sun City eqharhazileyo.
Ikhaya kwezona zilwanyana zintlanu ezinkulu zeli lo Mzantsi Afrika
Ungahlala kuyo endaweni yokuhlala eSun City
Ikumgama omncinci xa uqhuba isithuthi usuka eJohannesberg
Ikwindawo engenaso isifo sika malaleveva ePilanesberg National Park
I-Bakubung Bush Lodge ilungile okokuba ungahlala kuyo xa ufuna, ungahlali kwindawo ese Sun City, kude kwindawo exakekileyo esesixekweni. Lendawo ise Pilanesberg National Park engenaso isifo sika malaleveva, ungalindela ukonwabela ukuhamba ngesithuthi ubuke izilwanyana ezikwi hlathi i-African bush logama uhlala kufuphi kubunewu newu base Sun City.
Ukuhlala kwi hotele elungele usapho efumaneka eSun City, uthi ufumane indawo ezifakelwe umoya opholileyo amagumbi amancinane okanye ichalets ezihlalisa kamnandi. Igumbi ngalinye linezikhululo ze DSTV ( zikhululo ezongeziweyo) kunye negumbi lokuhlamba elise kamereni. Iindwendwe zingatyelela eSun City ngokuthi zingene kwi bhasi ezulayo ngexabiso elincinci.
Chitha intseni uhamba ngesithuthi ubukele izilwanyana ukhangela ezona zilwanyana zinkulu ezintlanu (Ingonyama, Umkhombe, Indlovu, ingwe kunye ne Nyathi) phambi kokuba ubuye kwakhona ukuyokuzithi nxu kwipuli yokuqubha eBakubung. Abantwana bangazonwabisa ngokudlala kwibala elinemidlalo yabantwana ngexesha wonwabele ukupotozwa eNoko Kalahari Spa.